“Shirkadaha Dahabshiil waxay noqon doonaan kuwa u horreeya ee fuliya sharci loo dejiyo lacagaha moobaylka la isugu diro sida Bangiga Adduunku soo jeediyey” – Maamule Cabdirashiid MS Ducaale | Somaliland Post
Home News “Shirkadaha Dahabshiil waxay noqon doonaan kuwa u horreeya ee fuliya sharci loo...
Hargeysa (SLpost)- Maamulaha Guud ee Dahabshiil Group Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale, ayaa sheegay in Shirkadaha Dahabshiil, eDahab iyo Somtel ay diyaar u yihiin fulinta iyo meel-marinta sharci kasta oo ku yimaadda talo-wadaag oo loo dejiyo Adeegga lacagaha laysugu xawilo mobile -ka (Mobile Money Transfer).
Cabdirashiid Ducaale oo isagoo ku taagan magaalada Washington ee dalka Maraykanka ay Idaacadda VOA waraysi kala yeelatay warbixin uu dhowaan soo saaray Bangiga Adduunka taas oo soo jeedisey inay muuqato baahi loo qabo sharci loo sameeyo lacagaha la isugu diro moobillada, waxa uu sheegay in sharcigu cid walba dan u yahay, Shirkad ahaanna ku dhiirrigelinayaan ganacsatada iyo shirkadaha kale soo-dhoweeynta sharci kobciya kalsoonida macmiilka, kobcisaba dhaqaalaha mujtamaca, guud ahaanba.
“Sharcigu shirkadaha laftoodu ilaalinayaa, dadka isticmaalaya (adeegyadoodaa) ayuu ilaalinayaa, tartankuu ballaadhinayaa, dadka lacagtooda ayuu sii xoojinayaa ku-aamin-qabkooda. Guul Ayaan u arkaa ciddii sharcigaasi khuseeyo dhammi inay ka wada shaqeeyaan, waana soo dhoweynaynaa haddaannu Dahabshiil nahay,” ayuu yidhi Maamuluhu.
Isaga oo ka jawaabaya su’aal ahayd inay shirkadaha isgaadhsiinyu hor taagan yihiin meelmarinta sharci qaabeeya xaddida oo lagu maamulo lacagaha dhex mara moobillada, waxa uu Cabdirashiid yidhi: “Haddaba shirkadaha isgaadhsiinta adeegyada ay bixiyaan waxa ay dhex maraan waddamada jaarka ah, waxa ay shirakado dibedda ah ka helaan ama ka qaataan liisanno, waxa ay fuliyaan sharciyada caalamiga ah ee isgaadhsiinta, sidaa darteed, waa ay yaqaanaan faa’iidada raacidda iyo ku-dhaqmidda sharciyadu leedahay, oo ma aha wax ku cusub, sidaa ayaana sharciyada shirkad iyo qofba dantu ugu jirtaa”.
Isaga oo sii amba-qaadaya, waxa uu iftiimiyey Maamule Cabdirashiid in baahi weyn bulshadu u qabto in qofka adeeg-qaataha ahi helo xorriyad uu ku maamulan karo Sim-kaadhkiisa, loogagana bixi karo kala-qoqobka, oo ah meelaha warbixinta Bangiga Adduunku taabatay.
“Ingiriiska, haddii aynu tusaale u soo qaadanno,” ayuu yidhi Maamuluhu, isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu intaas ku daray, “qofku isaga ayaa Sim-kaadhkiisa leh. Shirkadda uu doono ayuu lambarkiisa ula tegi karaa oo lacagtiisa ula tegi karaa. Dadka Soomaalidu waa inay xorriyaddaa helaan”.
Weriye, Maxamed Cabdi Xasan, waxa uu weydiiyey Maamulaha Guud sida loo xafidi karo qofka adeegga moobillada ee lacagaha isticmaalayaa, maadaama aanu qofku, sida shirkadaha lahayn caymis ama qareenno awood leh oo ilaaliya, si aan qawlaysato dhexda ugu gelin ama &nbsp;jabsan akoonkiisa, ama lacaguhuba si uun ugaga dhex lumaan adeegga.
“Haddii laga hadlayo dhulalka Soomaalida,” ayuu yidhi Maamule Cabdirashid Ducaale, “Ma aan maqal dhac sidaa u eg oo ka dhaca. Dhaqan, qabaa’il iyo siyaabo badan oo kale oo aynu adeegsanno ayaa jira. Meelaha qaarkood waad ka warhaysaan inaan qofku lacagta inta uu jeebka ku qaato meesha uu doono la mari Karin. Dhac weyn oo xoog la iskaga qaado oo shirkadaha waaweyn iyo macaamiishooda saameeya ma jiro. Shirkadda magaceeda ayaaba ku xumaanaya marka la yidhaahdo macmiil ayaa shirkaddaasi wixiisii siin weydey. Waxa arrimahaasi u badan yihii waddamadan dibedda.”
Isaga oo fasiraad ka bixinayey ujeeddada Warbixinta Bangiga Adduunku, waxa uu yidhi, “Waxa ay ka hadlaysaa in nidaamkii caalamka ee ‘Mobile Payment’ka (lacag-isugu-diridda moobilka) waa in la dhigaa. Kii Isgaadhsiinta waa in la dhigaa…maadaama shirkadaha isgaadhsiinta ee waddanka ka shaqeeya aany ku koobnayn oo keli ah gudaha ee caalamka la shaqeeyaan. Baayacmushtarkuba ma shaqeeyaan haddii gudaha oo keli ay ku kooban yihiin oo aanay xidhiidh dibedeed lahayn”.
“Haddii sharciyadii dibeddaba ay fuliyeen shirkaduhu, waa inay kii gudahana fuliyaan,” ayuu yidhi Cabdirashiid Ducaale, waxaanu intaas raaciyey, “Waa in nidaam xaq ah oo shirkadaha u dan ah, dadka isticmaalaya u dan ah, caalamkana la jaanqaadaya.”
Maamule Cabdirashiid Ducaale, waxa uu nuxurka Warbixinta Baanka Adduunka ku tilmaamay mid ku qotonta Inay shirkaduhu isku xidhmaan, lacagtu nidaam marto, dawladdu door ku yeelato, hay’adaha sharciyada lugta ku leh sida Baarlamaanku sharciyadii dhabta ahaa ee qabanayey sameeyaan, taladii shirkadaha la gaadho.
“Shirkaduhu haddii aany dhiirrigelin sharciga, dantooda u arag, danta macaamiisha u arag, danta shaqaalaha u shaqaynaya u arag ..iska horimaadyo ayaa ka imanaya,” ayuu hoosta ka xarriiqay.
Waxa uu farta ku fiiqay in dhinaca kale, shirkaduhu u “horseedaan dad iyo dalba horumar ballaadhan, shaqo-abuur sameeyeen, maskax badan geliyeen, maalkoodii u hureen, burbur badan oo inna soo maray ku lahaayeen door muuqda oo lagaga soo baxay, maantana waddoo casri ah looga sii gudbayo”.
Waxa uu Cabdirashiid mar kale caddeeyey in shirkadaha Dahabshiil ay wax kasta oo dan u ah ummadda Soomaaliyeed, dhaqaalahooda, dhaqankooda, ammaanka lacagahooda diyaar u yihiin oo kala shaqaynayaan cid kasta oo arrimahaa u xilsaaran ama ku hawlan gudo iyo dibedba.
“Sharcigu isaga ayaa koriya horumarka, dhaqaalaha, ammaanka, shaqo-abuurka. Isaga ayaa la dagaallama oo abuura jawi lagaga bixi karo saboolnimada,” ayuu yidhi Maamule AMSD.
Waxa uu Cabdirashiid dhiirrigeliyey in baayacmushtarku, gudo iyo dibedba, kordhiyaan maalgashiga gudaha, haddii hore wax ugu bilaabnaayeen, inta ku cusubina ku tallaabsato oo si mug leg u kobciyaan dhaqaalaha si loo abuuro fursado badan oo shaqo, loo hiigsado horumar dhidibbo adag ku taagan, uu u hanaqaado sharcigu, loona koriyo kalsoonida macmiilka.
Bangiga Adduunku waxa uu warbixin ilaa 66 bog ah ka soo saaray dhaqaalaha oo uu qayb weyn oo ka mid ah gaar uga yeelay suuqa aadka xawliga u soo koraya ee lacagaha Moobillada lagu qaato, lagaga adeegto ee lagu kala sarrifto lacagaha, iyada oo warbixintu soo jeedisey in sharciyad adag loo sameeyo baayacmushtarka mugga leh ee soo kordhay si loo sii kobciyo kalsoonida ka dhaxaysa shirkadaaga iyo macaamiisha, loogana hor tago wax kasta oo khakhal ku keeni kara adeeggaas.
Shirkadaha Dahabshiil oo heer caalami ugu adeega macaamiisheeda, waxa ay hormuud ka yihiin u-hoggaansanaanta sharciyadaha dal kasta oo ay ka shaqeeyaan.
Wasiirka Caafimaadka Oo Dhagax-dhigay Cusbitaal Dhimirka Ah Oo Laga...
HDesk - Modified date: July 9, 2015